💹 Forex. Ukukhuphela simahla kuvavanyo oluzimeleyo lwabacebisi, izikhombisi
Ukuphonononga iirobhothi zeengcali ezifanelekileyo ze-Forex, abacebisi ngeengcali (EAs), izikhombisi, ababoneleli ngeempawu. Thelekisa kubo ngokwenzuzo yabo kunye nokusebenza kwabo. Inkqubo yokuHlola enamandla.
Abacebisi abaGqwesileyo ngo-2021Iinkqubo zeMT4 Forex Iingcali zaBacebisi MT4 Iimpawu MT4 Amathala eencwadi MT4 Izixhobo MT4Iinkqubo zeMT5 Forex Iingcali zaBacebisi MT5 Iimpawu MT5 Amathala eencwadi MT5 Izixhobo MT5
Khangela amagama aphambili
Ezizimeleyo uphononongo lwabacebisi abaziingcali, izikhombisi, iindlela zokurhweba kunye nezikripthi zentengiso ye-forex
Iqela lethu lisebenza yonke imihla ukufumana uphuhliso olutsha kwimarike ye-forex. Indawo yethu ayithengisi ngokupheleleyo. Owona msebenzi wethu kukufumana iirobhothi ezinenzuzo yokwenene kunye nezalathi eziluncedo kubarhwebi, ngokusekwe kuvavanyo oluzimeleyo.
Eyona ikaliwe MT4 Iingcali zaBacebisi ngo-2021
Iindlela zokurhweba ezisetyenziswa kwirobhothi zisekwe kuhlalutyo lwevolumu. Uvavanyo lwezalathi ezili-16 zentengiso ye-Forex zisetyenziswa. Ilawulwa ngokuseta iiparameter ezimbalwa zekhowudi yealgorithm. Iimpawu eziphambili zerobhothi ezibekwe kwiwebhusayithi https://elonmuskea.com/ zezi zilandelayo:
Abacebisi abaGqwesileyo ngo-2021 Iingcali zaBacebisi MT4 Iingcali zaBacebisi MT5 Iinkqubo zeMT4 Forex
Ixabiso - 499 USD
I-EA isebenzisa amakhulu eendlela ezizodwa. sebenzisa izicwangciso ezininzi ngaxeshanye. Khetha izicwangciso zakho kwaye wakhe ipotifoliyo yakho yesiqhelo. Guqula iindlela ngalo naliphi na ixesha. Sebenzisa iipotifoliyo ezininzi ngale EA. Zonke izicwangciso ziyaqhubeka. Ezinye izicwangciso zifumana inzuzo engaphezulu kunabanye abaninzi. NgePortfolio X eqhuba umntu unokuqhuba ngeendlela ezininzi ukuze inzuzo yamacebo amnandi ibuyisele ukufumana ilahleko kwabanye, ivelise igophe lokulingana. Iqela leTelegram lamaLungu ePortfolioX MT5 okwahlukileyo apha Ulwazi ngokusetyenziswa ngokubanzi Ukukhuphela okusekwe kwifayile ngumbono olungileyo wokubuyisa le EA ngaphambi kokuyiqhuba kwiiakhawunti zakho zorhwebo. Cwangcisa iVolumuByRisk kwi-SYMBOL YENYANISO: Ixesha leTshati eliCwangcisiweyo: ukuseta okungagqibekanga I-EURUSD H1 IMODE YOKWENZA: Iakhawunti yokufihla Le EA inakho ukuqhuba izicwangciso ezininzi ngaxeshanye ukusuka kwiimpawu ezininzi kunye namaxesha abekiweyo Amacebo ekugqibeleni ayongezwa, atshintshwe okanye asuswe kuhlaziyo njengoko kufunyenwe iziphumo ezintsha. Ndineeseva ngokuqhubekayo ndikhangela ezingcono. Iiseti qhinga EURUSD_H1_STRATEGY_SET_02 (iindlela 135) EURUSD_H4_STRATEGY_SET_02 (iindlela 85) EURUSD_D1_STRATEGY_SET_02 (iindlela 207) USDJPY_H1_STRATEGY_SET_01 (iindlela 91) USDCHF_H1_STRATEGY_SET_01 (iindlela 106) AUDUSD_H1_STRATEGY_SET_01 (iindlela 154) AUDUSD_D1_STRATEGY_SET_01 (iindlela 37) CADCHF_H1_STRATEGY_SET_01 (iindlela 88) EURAUD_H1_STRATEGY_SET_01 (iindlela 137) GBPCAD_H1_STRATEGY_SET_01 ( Izicwangciso ezili-156) GBPCHF_H1_STRATEGY_SET_01 (iindlela ezili-120) GBPUSD_H1_STRATEGY_SET_01 (izicwangciso ezili-127) i-NZDUSD_H1_STRATEGY_SET_01 (iindlela ezili-116) * i-MT4 ingathengisa ngokuhlala […]
Abacebisi abaGqwesileyo ngo-2021 Iingcali zaBacebisi MT4 Iinkqubo zeMT4 Forex
Ixabiso - 1 399 USD
I-North East Way EA liqonga lokurhweba elizenzekelayo elizenzekelayo elithengisa kwizibini ezingahambelaniyo: I-AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Zonke iinkqubo zorhwebo zisebenzisa eyona patheni iphambili yentengiso yemali-ukungabikho kwesikhokelo sexesha elide kunye nokubuyela rhoqo kwexabiso kwixabiso eliphakathi. Indlela ekhawulezayo yeNdlela ekhawulezayo yeNdlela ye-MT15 iingcebiso malunga nokuqwalaselwa: Ungaqala ukurhweba kuzo zonke iiparitha zemali ezikhuthazwayo ngaxeshanye usebenzisa umzekelo omnye weNgcebiso yoMcebisi ene- "AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD". Ibhalansi yeakhawunti yokusebenzisa uMcebisi ngeNgcali kuwo onke amaqela adibeneyo kufuneka okungenani abe yi- $ 5. Le EA ayikhathalelanga ukusasazeka okanye ukutyibilika. Nceda usebenzise kuphela iindidi zemali ezicetyiswayo. Ukuvavanya uMcebisi ngeeNgcali: Unokuvavanya i-EA zombini ngambini nakwimowudi yemali emininzi. Kwi-MT500, indlela yovavanyo lwemali ezininzi iyaxhaswa. Unokuvavanya uMcebisi ngeNgcali kwimowudi "yamaxabiso avulekileyo". Kuba i-EA isebenza kuphela ekuvuleni ibha nganye elandelayo, le ndlela ayizukuziphazamisa iziphumo, kodwa ukuvavanya kuya kukhawuleza kakhulu. Vavanya i-EA kuphela kwixesha elibekiweyo le-M5. Ngamanye amaxesha, i-EA ayabelwe kwangaphambili. Vavanya i […]
Abacebisi abaGqwesileyo ngo-2021 Iingcali zaBacebisi MT5 Iinkqubo zeMT5 Forex
Ixabiso - 999 USD
"Uzinzile" ngumcebisi weengcali oguquguqukayo we-100% ngokusekwe kumaxabiso okuhamba. yinto eyakhelweyo ngaphakathi kwi-Smart Recovery algorithm.uthengiso olunye ngexesha. Yonke intengiso ibandakanya ukumisa ilahleko kunye nokuthatha inzuzo ukusuka ekuqaleni, kwaye ayitshintshi, oku kwenzelwa abo bafuna ukukhula okuzinzileyo okuzinzileyo kwixesha elide. sebenzisa ixabiso lesaphulelo. Ixabiso liya kwandiswa ukuya kuthi ga kwi-1299 yeedola ngoJanuwari 1-st. ”Uyaqina” kwi-MetaTrader5 ilapha: https://www.mql5.com/en/market/product/56240Iiperi ezicetyiswayoIzinto endizithandayo yi-EURUSD, i-EURJPY. Unokuzama ezinye izibini ezineseto esingqongqo ngakumbi "Ukuqina" akunamdla kubarhwebi, unokukhetha nawuphi na umrhwebi omthembileyo. Ukusasazeka okuncinci kunokuba ngcono, okunconywayo okunconywayo yi-1: 100 kunye no-1: 500 kungcono. Isakhelo seXesha leseti yenyani yokwenyani ayinamsebenzi. Kodwa, qiniseka ukuba unayo yonke idatha yamaxesha afumanekayo kwiziko lezembali (F2) UKUBUYELA EMVA KWI-MT4 ixesha elibekiweyo malibe yi-M1. Kuya kufuneka ulayishe onke amaxesha abekiweyo kwi-MT4. Kwi-MT5 naliphi na ixesha elibekiweyo lokuvavanywa ngasemva liya kusebenza. ILote Base, nganye kwi-1000 yeBhalansi-iseta iqashiso. Ibalwa njengeBaseLot * (Ibhalansi / 1000). Ke, ukuba uneAkhawunti ene-2000USD kunye ne-Base lot ngu-0.05, iqashiso lakho elithengisiweyo liya kuba yi-0.05 * (2000/1000) = 0.1Ukuvuselelwa kobundlobongela- "Ukuqina" kuye […]
Iingcali zaBacebisi MT4 Iinkqubo zeMT4 Forex
Ixabiso - 50 USD
Izinto ze-EA zeGolide nguMcebisi oqeqeshiweyo oyilelwe ngokukodwa urhwebo ngegolide. ukuba umsebenzi usekwe ekuvulweni kweeodolo kwisalathiso sezinto zeGolide, ke uMcebisi osebenzayo usebenza kwisicwangciso "sokulandela", esithetha ukulandela imeko. Iziphumo zexesha lokwenyani zinokujongwa apha Iqela leTelegram apha isikhululo setelegram apha IPARAMETERS Vula uthotho olutsha - ukuqala / ukucima ukuqala kothotho olutsha lokuthenga. Qalisa amaqashiso - isiqalo sokuqala. ukuthengwa korhwebo-vumela uMcebisi oyingcali ukuba athenge. Imakethi yorhwebo-vumela umcebisi oyingcali ukuba athengise. Sebenzisa uthango-xa umsebenzi unikwe amandla, i-EA iya kuthengisa zombini ithenge kwaye ithengise umkhombandlela, xa umsebenzi ukhubazekile, i-EA
Ixabiso: $ 699 6 kweekopi ezili-10 ezishiyekileyo ngeli xabiso Ixabiso elilandelayo $ 799 Umqondiso ophilayo https://www.mql5.com/en/signals/866039HIGLY RECOMMENDED BROKER FOR EUROMASTERTelegram channel: https://t.me/aura_gold_eaEuro Master yinkqubela phambili, automated Expert ngokupheleleyo kuphuhliswa urhwebo kunye EURUSD. Iingcali zisebenzisa itekhnoloji yobukrelekrele eyenziweyo yohlalutyo lweemarike ukufumana ezona ndawo zingcono zokungena. I-EA iqulethe ii-algorithms zentengiso ezizenzekelayo kunye nezinto zokuqinisa zokufunda. Ukuqiniswa komatshini wokufunda kwahlukile kwimfundo ebekwe esweni ngendlela engafuneki ukuba kufakwe iilebheli zokufakelwa / zokuphuma ukuze zibekhona, kwaye ayifuni zenzo zincinci ukuze zilungiswe ngokucacileyo. Endaweni yoko ijolise ekufumaneni ulungelelwaniso phakathi kokuhlola (kommandla ongafundiswanga) kunye nokuxhaphaza (kolwazi lwangoku). Iingcali zibonise iziphumo ezizinzileyo kwi-EURUSD kwisithuba sika-2004-2020. Akukho ndlela ziyingozi zolawulo lwemali zisetyenzisiweyo, akukho martingale, akukho grid okanye uthango. Ilungele nayiphi na imeko yomthengisi. Isimboli esebenzayo ye-EURUSD yexesha lokusebenza: I-M5 min idiphozithi: $ 100 Iimpawu: Akukho martingale, igridi, uthango okanye ezinye iindlela eziyingozi zolawulo lwemali zisetyenzisiwe Ukuphulukana nelahleko kwaye uthathe inzuzo kwisikhundla ngasinye Ukungakhathali kwiimeko zomthengisi Kulula ukufaka Useto: I-AutoLot (Ipesenti yeDepo yokuSebenza) -Ukubalwa kwamaqashiso okuzenzekelayo kwiipesenti zedipozithi Lungisa uLote (ukuba u-0 emva koko u-Ngokuzenzekelayo) -Lungisa ixesha elininzi ukuze uvule urhwebo - Qalisa iyure ukuvula urhwebo uMzuzu ukuvula […]
Ixabiso - 447 USD
10% Ukuthengiswa kweeholide! Ixabiso eliqhelekileyo ($ 497) 10% Ukuthengiswa kweeholide! Ixabiso eliqhelekileyo ($ 497) I-Ranger EA inoluhlu olude kakhulu lweengoma ezili-12! I-EA inerekhodi elide emva kweminyaka eli-10 isebenzisa i-99.90% yokulinganisa umgangatho! I-Ranger EA V3.61 Idatha yokubuyisela emva ibonisa ukuba akukho zinyanga zilahlekileyo kwiminyaka eyi-10! Iprojekthi yenzuzo yenyanga ye-2.5-10% ngenyanga (ulungelelwaniso olungagqibekanga) ukuqala kwakhona ukuthengiselana ngeveki nge-GBPCAD
Ndonwabile ukwamkela enye kuyo yonke iphepha lewebhu lemveliso yam - ndingumbhali wayo uVasily Strukov Umcebisi oyingcali ulula kwaye kulula ukuyisebenzisa - uyincamathisele usebenzisa useto olungagqibekanga lwe-eurusd gbpusd nzdusd audusd m5. Ukufumana iziphumo ezifanelekileyo, kuyacetyiswa ukuba urhoxise umgaqo wokurhweba kwibhodi yabacebisi abaziingcali kwigrafu- "ukuthengwa kwezorhwebo" (umbala oluhlaza kwiphaneli kuya kuthetha ukuba umcebisi oyingcali uvumelekile ukuba athenge, bomvu akukho semthethweni) okanye "urhwebo thengisa ”(ngokunjalo). Ndifumanisa ulwalathiso lorhwebo ndisebenzisa isalathiso sezinto zegolide. Umcebisi oyingcali unezicwangciso ezi-4-kwi-stochastic, RSI, MA kunye ne-vededenie odolo ezivulwe ngumsebenzisi, umyinge usetyenzisiwe.Ungongeza iiodolo nangaliphi na ixesha - ngokuvula nje, uMcebisi oyingcali uya kuzilawula, nokuba uyavula kubo kwisiphelo sendlela kwifowuni yakho. Yonke imihla ndipapasha useto lwam kwiqela le-telegram, sijoyine. Ndiza kuphendula nayiphi na imibuzo yakho, ndiya konwaba ukuba luncedo. Iziphumo zexesha lokwenyani zinokujongwa apha Incwadana yengcebiso yoMcebisi incanyathiselwe kwinkcazo 867 Iziphumo zexesha lokwenyani zinokujongwa apha Incwadana […]
Ixabiso - 312 USD
10% Ukuthengiswa kweeholide! Ixabiso eliqhelekileyo ($ 347) 10% Ukuthengiswa kweeholide! Ixabiso eliqhelekileyo ($ 347) I-Pinpoint EA sisiphumo seeveki ezi-6 zomzamo wokwakha i-EA ekulungeleyo ukubuyisa ngokukhuselekileyo ngokulahleka kwezorhwebo ngaphezulu kweminyaka engama-17 yokubuyela umva. Ireyithi yokuphumelela kwaye ayikaze yehle ngaphezulu kokurhweba kabini ngokulandelelana kwiminyaka eli-94 yokuvavanywa kwi-GU nakwi-EU. I-EA ithengisa phantse kwiibhasi zemihla ngemihla kwaye ikhupha umvuzo ngeveki! Khomba idatha ye-V17 ebuyileyo ibonisa i-1.8% yenqanaba lokuphumelela ngaphezulu kweminyaka eyi-94! Iprojekthi yenzuzo yenyanga ye-17% ngenyanga (ulungelelwaniso olungagqibekanga) Ukurhweba veki nganye kuThengisa i-EURUSD
Ixabiso - 149 USD
IVEKI EPHELILEYO IXABISO LAMAxabiso !!! 🏃 🏃 🏃 misela iifayile (abantu aba-2): / GOLD_M5. setha / GOLD_M15. setha / GOLD_H1. Lo mcebisi oyinyani uya kuyilwa ngokukodwa kuseto lweXAUUSD (GOLD). Esi sisicwangciso esiliqili esisebenzisa isibonisi seTrendLine PRO kunye nokuthengiselana kumaxesha abekiweyo e-M1-M15Umcebisi oyingcali unephaneli yokurhweba ephathekayo yokuphatha imisebenzi yokuthengisa ngokuzenzekelayo kunye nokukwazi ukuvula imicimbi ngesandla. Lonke urhwebo oluvulwe kumthengisi kwimowudi yesandla luya kuvalwa ngenzuzo kusetyenziswa i-DD ukunciphisa useto lweMisebenzi. Singatsho ukuba isenzo soMcebisi oyingcali kukuzisa urhwebo ngenzuzo
Izinto zokubuyisela izinto zegolide EA ngumcebisi oqeqeshiweyo osebenza kwisalathiso segolide seStuff trend. ukuba utshintsho luyatshintsha (umbala wesalathisi utshintsha), i-EA ivala ukuthengwa kwaye ivule kwicala elichaseneyo. kwangaxeshanye, inesakhono sokuvula ulungiselelo ngeqashiso eliphezulu okanye efanayo. Ayisebenzisi igridi yokuthenga. Iziphumo zexesha lokwenyani zinokujongwa apha Iziphumo zexesha lokwenyani zinokujongwa apha I-Telegram ebekwe apha ijelo le-telegram apha IIPARAMENTI I-Telegraph ebekwe apha ijelo le-telegram apha I-Telegram ebekwe apha isiteshi se-telegram apha I-PAMARTERS Vula umtya omtsha -cima / ucime ukuqala kwenkqubo yeodolo entsha. Qalisa amaqashiso - isiqalo sokuqala. Ukuthengwa kwezorhwebo-vumela umcebisi oyingcali ukuba athenge. Ukuthengisa ngokuthengisa-vumela umcebisi oyingcali ukuba athengise. Sebenzisa uthango-xa umsebenzi wenziwe ukuba usebenze, i-EA iya kuthengisa zombini ithengise kwaye ithengise izikhombisi-ndlela, xa umsebenzi ukhubazekile, i-EA iya kuthengisa icala elinye kuphela. Sebenzisa ukuPhathwa kweMali-ukucima / ukucima usebenzisa ukubala okuzenzekelayo. I-Autolot. Umda wasimahla kwilotho nganye ye-0.01-isixa semali yasimahla yokuvula iyunithi nganye ye-0.01. I-Lot miltiplier- into yokuphindaphinda kweqashiso xa ufumana ilahleko. TP-thabatha […]
Imo ye-EA-isebenza malunga nesalathiso seMomentum, esisalathiso esikhokelayo. ukungena kwisikhundla, uMcebisi oyingcali usebenzisa ukugqithisa okanye ukubeka ngaphezulu kwesalathisi, ukubamba "imo" yabathengisi. Iziphumo zexesha lokwenyani zinokujongwa apha iziphumo zexesha lokwenyani zinokujongwa apha I-Telegram ebekwe apha ijelo le-telegram apha IIPARAMENTI I-Telegraph ebekwe apha ijelo le-telegram apha I-Telegram ebekwe apha isiteshi se-telegram apha IIMPAWU Vula umtya omtsha -ukucima ukuqala kwenkqubo entsha yeodolo. Qalisa amaqashiso - isiqalo sokuqala. Ukuthenga urhwebo-vumela umcebisi oyingcali ukuba athenge. Imakethi yorhwebo-vumela umcebisi oyingcali ukuba athengise. Ukuxhaswa kwee-odolo zemiyalelo -ukucima / ukucima ukugcinwa kwee-odolo kuqalwe kumsebenzisi yingcali yoMcebisi. Sebenzisa uthango-xa umsebenzi wenziwe ukuba usebenze, i-EA iya kuthengisa zombini ithengise kwaye ithengise izikhombisi-ndlela, xa umsebenzi ukhubazekile, i-EA iya kuthengisa icala elinye kuphela. Sebenzisa ukuPhathwa kweMali-ukucima / ukucima usebenzisa ukubala okuzenzekelayo. I-Autolot. Umda wasimahla kwilotho nganye ye-0.01- isixa semali yasimahla yokuvula iyunithi nganye ye-0.01 ILot miltiplier- ukuphindaphindeka kwezinto ezininzi kwezi odolo zilandelayo. TP-ukuthatha inzuzo, kwiipips. Ukulahleka kwe-SL-stop, kwiipips ezivela kwi-odolo yokuqala. Inyathelo leGridi […]
Ixabiso - 2 030 USD
Ukucwangciswa okungagqibekanga: i-imeyile ye-EURUSD M5: [imeyile ikhuselwe] i-telegram yasemva kwemini: @leontolstoy ⚡️ kumthengisi? Sijoyine-iqela elikwi-telegram ⚡️ ukucwangciswa okungagqibekanga: i-imeyile ye-EURUSD M5: [imeyile ikhuselwe] i-telegram yasemva kwemini: @leontolstoy ⚡️ kumthengisi? Sijoyine-iqela elikwi-telegram signal️ ✔️Umqondiso wenyani onembali engaphezulu kweminyaka eyi-1.8; ✔️ I-server yakho GoGoPips.com yeendaba kunye nenkqubo yokulawula ukurhweba kwi-Intanethi: Ukongeza kwikhalenda yeendaba eziqhelekileyo, iStenvall Invest inecebo lokucoca kwi-Intanethi elikhusela ukurhweba ngexesha leziganeko ezibalulekileyo. Awudingi ukukhubaza / ukwenza urhwebo, iStenvall Invest iya kwenza yonke into ngokuzenzekelayo; Inkqubo yesaziso esikude, apho uya kufumana khona imiyalezo eyimfuneko ngqo kwitshathi ye-EURUSD ngaphandle kokundwendwela ezinye izixhobo kunye nokukhangela ulwazi; ✔️ I-server yakho GoGoPips.com yeendaba kunye nenkqubo yokulawula ukurhweba kwi-Intanethi: Ukongeza kwikhalenda yeendaba eziqhelekileyo, iStenvall Invest inecebo lokucoca kwi-Intanethi elikhusela ukurhweba ngexesha leziganeko ezibalulekileyo. Awudingi ukukhubaza / ukwenza amandla
Ixabiso - 35 USD
ukubeka esweni umsebenzi wokwenyani, ukongeza kolunye uphuhliso lwam kunokubonwa apha: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Telegraph ilapha. Iingcebiso Iibhanki zemali I-EURUSD yexesha elimiselweyo M15 Idiphozithi ephakanyisiweyo yeedola ezili-1,000 5 okanye iisenti Ukucwangciswa okucetyiswayo Ukucwangciswa okungagungqiyo kokujonga umsebenzi wokwenyani, ukongeza kolunye uphuhliso lwam kunokubonwa apha: https://www.mql15.com/ru/users/mechanic/ Umthengisi weTelegram ulapha. Iingcebiso Iibhanki zemali I-EURUSD yexesha elimiselweyo M1,000 Idiphozithi ephakanyisiweyo yeedola ezili-5 5 okanye iisenti Ukucwangciswa okucetyiswayo Ukucwangciswa okungagungqiyo kokujonga umsebenzi wokwenyani, ukongeza kolunye uphuhliso lwam kunokubonwa apha: https://www.mql15.com/ru/users/mechanic/ Ukubeka iliso kumthengisi womsebenzi wokwenyani, ukongeza kolunye uphuhliso lwam kunokubonwa apha: https://www.mql1,000.com/ru/users/mechanic/seller Iingcebiso ngexabiso lemali ye-EURUSD Ixesha lesakhelo MXNUMX Idiphozithi ephakanyisiweyo yeedola ezili-XNUMX XNUMX okanye iisenti Uqwalaselo olucetyiswayo ulungelelwaniso olungagqibekanga olutsha lwe-Cycle-xa imowudi yenziwe, i-EA isebenza ngaphandle kokumisa, xa imowudi icinyiwe, i-EA ayizukuvula iiodolo ezintsha ukuphela kothotho lwentengiso; Ukuthengwa koRhwebo -ukuvula / ukucima ukuvula ii-oda zokuthenga; Thengisa ngerhwebo-on / off. ukuvula ii-oda Thengisa; Ukulawula ii-odolo zesandla-ingcali yoMcebisi iya kulawula iiodolo zomsebenzisi; Ininzi yokuqala - iqashiso lokuqala; Ukuphindaphinda kweLot - ukuphindaphinda kweqashiso kwii-odolo ezilandelayo; I-Autolot-yenza / khubaza ukubalwa ngokuzenzekelayo kweqashiso; Ubungakanani be-Autolot-isixa sedipozithi esithi […]
Iqonga lokurhweba lamkelekile kubo bobabini abathengisi abanamava kunye nabaqalayo. I-EA inokhuselo ekusasazeni okuphezulu kwaye ikuvumela ukuba utshintshe kunye nomlinganiso omiselweyo okanye ozenzekelayo. Ukulandelwa komsebenzi wokwenyani, ukongeza kolunye uphuculo lwam kunokubonwa apha: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Telegraph ilapha. Iiparameter zokufaka umjikelo omtsha-xa isitayile sivuliwe, i-EA isebenza ngaphandle kokuyeka, xa imowudi icinyiwe, i-EA ayizukuvula ii-odolo ezintsha ekupheleni kothotho lwezorhwebo; Ukuthengwa koRhwebo -ukuvula / ukucima ukuvula ii-oda zokuthenga; Thengisa ngerhwebo-on / off. ukuvula ii-oda Thengisa; Ukulawula ii-odolo zesandla-ingcali yoMcebisi iya kulawula iiodolo zomsebenzisi; Isiqalo sokuqala - iqashiso lokuqala; Ukuphindaphinda kweLot - ukuphindaphinda kweqashiso kwii-odolo ezilandelayo; I-Autolot-yenza / khubaza ukubalwa ngokuzenzekelayo kweqashiso; Ubungakanani be-Autolot-isixa sedipozithi esiya kuthi i-EA isebenzise iLot xa i-Auto lot yenziwe; Umgama - umgama phakathi kwee-odolo; Ubuninzi bobuninzi-elona qondo liphezulu linokuvulwa yi-EA; Ubuninzi bokuthenga ii-odolo -lona nani liphezulu lee-odolo zokuthenga; Ii-oda zokuthengisa zikaMax lelona nani liphezulu lee-odolo zokuthengisa; Thatha iNzuzo, amanqaku (0 - awusebenzisi) - thatha inzuzo ngamanqaku; Option Thatha Inzuzo-vala uthathe inzuzo xa kuvulwa […]
I-Metatrader 4: Forex Izalathisi
Ixabiso - 49.99 USD
ukuphakama kunye nokuhla kwexabiso. Ukuze kube lula kumrhwebi, inzuzo yenzuzo nganye yomqondiso iboniswa kwitshathi. Isalathisi asiyi kuphinda senziwe kwakhona, isignali ibonakala emva kokuba ibha ivaliwe. Inkcazo yeparametersSendAlert-eyenza isaziso somqondiso omtshaSendEmail-yenza ukuthumela isaziso malunga uphawu olutsha kwi-imeyileSendPushNotification-yenza ukuthumela izaziso zokutyhala malunga nomqondiso omtshaProfitPointer-bonisa ulwazi malunga nenzuzo enokubakho yomqondiso kwitshathiArrowSize - ubungakanani besikhombisi somqondiso kwi
Iimpawu MT4 Iinkqubo zeMT4 Forex
Ixabiso - 2 500 USD
Esi salathisi siyinxalenye yeenkqubo ze-RPTrade Pro Solutions.I-DTS sisalathiso semihla ngemihla sisebenzisa amaXabiso amaXabiso, iNkxaso yeDynamic kunye nokuHlala. Yenzelwe ukuba isetyenziswe nangubani na, kwanabaqalayo ekurhwebeni bangayisebenzisa. UNGAZE uphinde upende. Iimpawu zinikezelwa ukusuka kufutshane ukuvala. Eyilelwe ukusetyenziswa yodwa, akukho zalathisi zinye ziyafuneka. Ukunika imeko kunye nokubanakho Thatha iNzuzo ekuqaleni kosuku. Isebenza njani i-DTS isebenzisa isicwangciso sokuqhekeka esidityaniswe nesenzo sexabiso kunye nenkxaso enamandla kunye nokuHlala. Isimo sasebusuku kunye nokuguquguquka kuyahlaziywa ukuze kusetyenziswe ngosuku olulandelayo. Ukusuka kolu hlalutyo kumiselwe imida yokuqhekeka (eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nelayini emnyama yeorenji) kunye neNzuzo yokuThatha "impumelelo" yesicwangciso kunye noseto inokujongwa kwangoko ngenxa yedatha yeMbali. Inxalenye yezembali ivumela ukubona kwangoko ukuba ikhona na "imingxunya" kwisicwangciso kwaye ekugqibeleni ukhethe enye i-TimeFrame okanye uphawu oluya kulunga ngcono. Ngexesha lokwenyani kwikhandlela elikufutshane nekhandlela vala isalathiso sentsingiselo silinda ukuba iimeko zomqondiso zisebenze kwaye siyibonise ngotolo (eluhlaza ukuthenga kunye neorenji iyathengiswa). Imigca yedash ebomvu ibonisa apho […]
Ixabiso - 19 USD
iziphumo zibi ngakumbi kubo
I-Metatrader 5: I-Forex Expert Advisors
Ixabiso - 239 USD
"I-Super Wave MT5" ngumcebisi weengcali oguqukayo osekwe kwimo yebhanti. Ine-algorithm yokulandelela amaxabiso eyakhelweyo ngokukodwa, eyilelwe ngokukodwa ukuthengisa i-EURUSD. Imiyalelo elindelekileyo yokubuyiselwa kwexabiso ngalinye. Yonke intengiselwano iya kuhlalutya amaxabiso okwangoku kunye nokuhla kwamaxabiso. Misa ilahleko kwasekuqaleni, kwaye uzuze kuyo. Kuthengiswa nge-60% yexabiso lokuqala, $ 239 USD kuphela kwiiveki ezi-2! Ixabiso loqobo yi- $ 399 USD. "I-Super Wave MT5" ngumcebisi weengcali oguqukayo osekwe kwimo yebhanti. Ine-algorithm yokulandelela amaxabiso eyakhelweyo ngokukodwa, eyilelwe ngokukodwa ukuthengisa i-EURUSD. Imiyalelo elindelekileyo yokubuyiselwa kwexabiso ngalinye. Imiyalelo engekenziwa
Iingcali zaBacebisi MT5 Iinkqubo zeMT5 Forex
*** Comece a negociar na bolsa brasileira de forma automática *** - 50% OFF - Preço yokuvula $ 50 - Próximo preço $ 100 -O Ichimoku Ninja EA é um robô de negociação para Mini-Índice (WIN) e Mini-Dólar (WDO), negociados na bolsa brasileira.O robô opera conforme tendência, com base no indicador Ichimoku Kinko Hyo, de acordo com sua dinâmica. I-dinímica da Banda de Bollinger, de acordo yenza i-configurar também um sistema de trail.
Ixabiso - 199 USD
Lo ngomnye wabacebisi abaziingcali kwezorhwebo lwegolide. Umcebisi oyingcali unokurhweba ngempumelelo kumaqonga wabarhwebi abahlukeneyo abaneemeko ezahlukeneyo zokurhweba, kwaye kufanelekile kwi-netting kunye ne-akhawunti yeedge. Umcebisi weNgcali ubonakalisa ukusebenza okuzinzileyo kule minyaka ili-10 idlulileyo. Useto olungagqibekanga luyafana nokusebenza okuzinzileyo, kodwa iziphumo zinokuba ziodolo ezininzi zobukhulu obuphezulu. Izinto eziluncedo: Ubuncinci besetingi bukuvumela ukuba ukhethe ngokukhawuleza iiparameter ezifanelekileyo. Umcebisi weNgcali uneenkqubo ezi-3 zokubuyisa emva kokulahleka. Soloko usebenzisa iLast Stop Stop kwaye uthathe iNzuzo. Ngexabiso elifanelekileyo leeparameter zokufaka, ukwehla akudluli kwi-30%. Inkxaso ye-hedge kunye ne-akhawunti ye-netting. Iyahambelana nemithetho yeFIFO. Ubuncinci besetingi bukuvumela ukuba ukhethe ngokukhawuleza iiparameter ezifanelekileyo. Umcebisi weNgcali uneenkqubo ezi-3 zokubuyisa emva kokulahleka. Soloko usebenzisa iLast Stop Stop kwaye uthathe iNzuzo. Ngexabiso elifanelekileyo leeparameter zokufaka, ukwehla akudluli kwi-30%. Inkxaso ye-hedge kunye ne-akhawunti ye-netting. Iyahambelana nemithetho yeFIFO. Indlela yomngcipheko: Uhlobo olusezantsi / oluphakathi / oluPhezulu lweLot: Fixed / Auto Lot size / percent StopLoss TakeProfit Slippage Magic Number Risk Mode: Low / Middle / High Lot Type: Fixed / Auto Lot size / percent StopLoss TakeProf
I-Metatrader 5: I-Forex Izalathisi
Ixabiso - 30 USD
Ulwazi lonjiniyela: ▸ Amaxabiso emigca kunye nemibala: Isikhuseli 0: Ixabiso lomgca weZigZag; Isikhombi 1: Ixabiso lombala weZigZag; I-Buffer 2: Ixabiso lomgca ophakathi; I-Buffer 3: Ixabiso lombala weMedian; Buffer ukufumana amaxabiso ento nganye ephezulu kunye nezantsi.I-Buffer 5: Ixabiso eliphezulu; IBuffer 6: Ixabiso leebhotile; Ulwazi lonjiniyela: ▸ Amaxabiso emigca kunye nemibala: Isikhuseli 0: Ixabiso lomgca weZigZag; Isikhombi 1: Ixabiso lombala weZigZag; I-Buffer 2: Ixabiso lomgca ophakathi; I-Buffer 3: Ixabiso lombala weMedian; ▸ Isikhonkwane ukufumana amaxabiso ento nganye ephezulu nasezantsi
Iimpawu MT5 Iinkqubo zeMT5 Forex
Ixabiso - 99 USD
UTom DeMark uvelise ngokulandelelana kwe-TD ngesandla, ngenkqubo yovavanyo kunye nephutha, kwii-1970s. Ayikhe indimangalise into yokuba into eyenziweyo kwasekuqaleni yokuhlalutya idatha yamaxabiso emihla ngemihla ingasetyenziswa ngokukuko, ngaphezulu kweminyaka engamashumi amathathu kamva, kulo naliphi na ixesha elisikiweyo-ukusuka kumzuzu omnye ukuya kunyaka-nakwezinye iindawo zentengiso. Isalathi sinamacandelo amabini: Ukuseta i-TD, exhomekeke kumandla okuchaza amaxabiso amaxabiso, kunye nokubala kwe-TD, okusekwe kumkhwa, kwaye kujonge amathuba anobungozi obuncinci bokuphelisa amanyathelo amiselweyo. UTom DeMark uvelise ngokulandelelana kwe-TD ngesandla, ngenkqubo yolingo
Ixabiso - 40 USD
Iimakethi zithanda amanani ajikelezayo kwaye zihlala zisebenza njengenkxaso kwimarike ewayo, okanye ukunganyangeki njengoko amaxabiso enyuka. Esi salathisi senzelwe ukuzoba amanqanaba amaxabiso kumaxabiso ajikelezayo. Yenza oku ngokuzenzekelayo, kodwa nawe unokhetho lokugqitha kwaye umisele amanqanaba onqwenela ukuwabona. Inqanaba elijikelezileyo linokuba lula njengamanyathelo e-10, ke ngo-10, 20, 30 njl njl okanye ukuba usebenza ne-Forex, mhlawumbi ufuna ukubona utshintsho ku-0.1 okanye ku-0.01. Isalathiso sitsala iiklasi ezimbini zomgca, eziMkhulu kunye neeNcinci, nganye inefomathi eyahlukileyo. Oku kukuvumela ukuba ubone utshintsho phakathi kweenguqu ezimbini ezahlukeneyo kwinqanaba ngaxeshanye. Olu luhlobo lweMT5 lwesalathi. Ukuba ufuna uguqulelo lweMT4, yiya apha: Isilumkiso sesalathi siquka ukubanakho kwesandi sokulumkisa nokuba kukhulu, kuncinci okanye kumanqanaba amaxabiso omabini xa ixabiso liza kumgama onokuqwalaselwa. Ukuseta ngokuzenzekelayo Ngokuzenzekelayo, isalathiso siyakumisela inqanaba elifanelekileyo kuwo omabini amaxabiso amakhulu kunye naMancinci. Iyakwenza oko isebenzisa useto lweDensityIndex emiselweyo elawula ukuba mingaphi imigca ofuna ukuyibona kwiscreen ngalo naliphi na ixesha. Ukuba ubeka eyakho […]
Ukuhlaziywa kweeRobhothi yeMT4
Ixabiso - 77 USD
Ixabiso - 201 USD
I-Avatar yiTrend Retracement EA isebenza kulandelelwano lwezibini ngoku kwi-H1 isakhelo sexesha..Ijonga ukuBuyiselwa kweXabiso ikakhulu ngokusekwe kwiSuperTrend nakwezinye izikhombisi. ngaphezulu kwesibini kwicandelo lamagqabantshintshi
Ixabiso - 299 USD
Isimahla kwabo bavula iakhawunti 👉🏻 https://bit.ly/Broker_AxiTrader enobuncinci bokulingana kwe- $ 500 Isebenza kuyo yonke imali kunye neebhangqa zentsimbi, ungafaka ezininzi ngaxeshanye, ndincoma ukusebenzisa izibini ezi-4 kuyo yonke i-250usd eseleyo ekhoyo. iiseti> https://www.mql5.com/en/blogs/post/740296 izindululo Idipozithi encinci ecetyiswayo yi- $ 250. sebenzisa i-ECN broker ngesivuno esiphantsi kunye nokwenza ngokukhawuleza. Kunconywe: I-Axitrader okanye ii-Icmarkets Iimpawu eziphambili: i-EURUSD, i-GBPUSD, i-XAUUSD, i-XAGUSD kunye ne-USDJPY. Imihla emiselweyo: I-H1 yezona ziphumo zibalaseleyo zokurhweba, sebenzisa iVPS ngekhonkco elikhawulezayo. https://t.me/FxTraderExperts yesiteshi yocingo simahla kwabo bavula iakhawunti 👉🏻 https://bit.ly/Broker_AxiTrader ubuncinci bokulingana kwe- $ 500 yasimahla kwabo bavula iakhawunti 👉🏻 https: // bit. ly / Broker_AxiTrader ngobuncinci bokulingana kwe- $ 500 Isebenza kuyo yonke imali kunye neepali zentsimbi, ungafaka ezininzi ngaxeshanye, ndincoma ukusebenzisa izibini ezi-4 kuyo yonke i-250usd yemali ekhoyo. iiseti> https://www.mql5.com/en/blogs/post/740296 izindululo Idipozithi encinci ecetyiswayo yi- $ 250. sebenzisa i-ECN broker ngesivuno esiphantsi kunye nokwenza ngokukhawuleza. Kunconywe: I-Axitrader okanye ii-Icmarkets Iimpawu eziphambili: i-EURUSD, i-GBPUSD, i-XAUUSD, i-XAGUSD kunye ne-USDJPY. Imihla emiselweyo: I-H1 yezona ziphumo zibalaseleyo zokurhweba, sebenzisa iVPS ngekhonkco elikhawulezayo. https://t.me/FxTraderExperts
Izikhombisi ze Forex Review yeMT4
Amathala eencwadi e Forex yeMT4
I-Auto Swing Gold EA iya kwenza inkqubo yokurhweba kubarhwebi be-swing, isebenze ngokusemandleni ayo ngeGOLD okanye i-XAUUSD kwi-30 Minute Ixesha elibekiweyo. Ukusuka nge-20 kaJulayi 2020 ukuya kwi-31 ka-Disemba 2020 yeziphumo zangasemva, le EA ikwazile ukufumana i-5000% kungaphelanga unyaka NGAPHANDLE kwayo nayiphi na ingozi enkulu okanye iindlela ezinobungozi njengokunyusa amaqashiso emva kokuphumelela okanye ukuphulukana norhwebo (okwaziwa ngokuba yiMartingale, D'Alembert kwaye njl.) ezi ndlela zinomngcipheko omkhulu sele zitshabalalisile uninzi lweeakhawunti zokurhweba. Nokuba le EA ayisebenzisi nayiphi na kwezi ndlela, inokufumana i-1000% ye-ROI
I-PZ evulekileyo yeRange EA
Ukuphakanyiswa kungena kumrhwebi kwezorhwebo kwaye enye indawo yokumisa iba yindawo yokumisa. Uphando lukaCrabel lubonisa ukuba ngaphambili kwiseshoni yokurhweba indawo yokungena iye yabethwa kokukhona urhwebo lunokuba luncedo
Iindaba zamva nje ukusuka kwihlabathi le-forex
Iirobhothi eziphezulu ezi-5 zokurhweba ngenzuzo kwi-forex ngo-2021
Irhwebo lotshintshiselwano lwangaphandle yenye yeendlela zokwenza enkulu kunye nengeniso ethe chu ngexesha elifutshane elifanelekileyo. Ukuphanda ngeemarike ezahlukeneyo zehlabathi, kanye ukuba iimeko ze-geopolotiki zichaphazela njani ezo marike, kunye nokuvavanya ukhuseleko lwemozulu ethile yezoqoqosho zizinto ezinceda umtyali mali avavanye ukuba yeyiphi na imali yamazwe aphesheya eya kuthi ngokuqinisekileyo iqinise ukubekwa kwayo kunye nalapho olona tyalo-mali lusebenzayo ukuba yenziwe. Ingcali kunye nabatyali mali abanezakhono benza amakhulu eerandi ngokujongana nemali yamanye amazwe ngexesha elichanekileyo. Ngokobuchwephesha kujongeka ngokuthe ngqo, nangona kunjalo ayinguye wonke umntu onokuvavanya ngokufanelekileyo imiba eyahlukeneyo echaphazela impumelelo yomsebenzi. Ngokulula kwiimeko ezinjalo, iirobhothi zokurhweba ngokuzenzekelayo ziye zenziwa ukunceda nabani na ukuba aphumelele. Uncedo olukhulu lweerobhothi zokurhweba zeMT4 kunye neMT5 kwindawo yethu. Okwangoku sifuna ukukwazisa malunga neyona irobhothi isebenzayo. 1. I-FX ekhawulezayo ye-EA oyena mcebisi we-forex osebenzayo kwiinzuzo zexesha elide IWebhusayithi: fxrapidea.com Ixabiso: $ 349 Iibhanki zemali: I-EURUSD, i-NZSUSD, i-AUDUSD kunye ne-USDJPY yeXesha leFreyimu: Naliphi na iqonga: I-Metatrader 4 FX Rapid EA uphononongo kwi-fxbotreview.com Ukuba nenkqubo yorhwebo enobuchule kwaye iphuhliswe kakuhle […]
Forex Iirobhothi Forex ephezulu
Abacebisi abaPhambili be-Forex be-10 kule minyaka ilishumi idlulileyo
Abatsha kwimarike ye-forex bahlala bezama iindlela ezintsha kunye neendlela zokuvelisa inzuzo ngexabiso eliphantsi kakhulu. Ukwenza oku, basebenzisa abacebisi ngeengcali-izixhobo ezinokwenza umsebenzi womrhwebi uzenzekelayo. Izixhobo ezingcono zokuzenzekelayo zingena kumlinganiso, ekuvumela ukuba ukhethe isoftware efanelekileyo kwimeko nganye. Kutheni usebenzisa iirobhothi zangaphambili? I-MetaTrader 4, eyaqala ukwaziswa kwiminyaka eyi-15 eyadlulayo, iyafuneka phakathi kwabarhwebi namhlanje. Ngexesha leminyaka elishumi kwintengiso, iqonga liye laya kuphuculwa okuninzi, lisenza inkokheli phakathi kwabakhuphisana nabo. Ngenxa yoko uninzi lwaBacebisi boNgcali banamhlanje baphuhliswa ngokukodwa kwiMetaTrader 4 kunye neMetatrader 5 ngokunjalo. Masichaze ezona zizathu ziphambili zokuba kutheni kusengqiqweni ukusebenzisa iirobhothi zorhwebo lwe-forex: -Ukwenza lula urhwebo, olulungele abaqalayo; -Ukunyusa inzuzo ngaphandle kotyalo-mali olongezelelweyo; Ukulungiswa kweenkqubo zomsebenzi; - Ukusetyenziswa kweendlela ezintsha zokurhweba kunye nezixhobo. Rhoqo, abathengisi abatsha baqala amava abo okurhweba ngeakhawunti yedemo. Le yindlela elula yokuzama iindlela ezahlukeneyo kunye nezixhobo kunye nokufumana amava kunye nolwazi. Xa usebenza ngeakhawunti yokwenyani, kuyacetyiswa ukuba ufumane iNgcali ye-Forex ethembekileyo […]
Metatrader 5 Ukuphononongwa kwabacebisi ngeengcali
Ixabiso - 200 USD
Iingcali zililungu leprojekthi yeengcali zokuphucula ukusebenza kwam. Isebenza ngeefayile zokugcina iiparameter, iiparameter zokufaka kunye neparam yesicelo somthengisi.Iingcali zisebenzisa izikhombisi ezi-2 zidityanisiwe ukwenza ukungena kwezorhwebo kunye nokukhoyo kurhwebo.Ndithatha iminyaka emi-2 ukuphanda olu vavanyo lwenkqubo ngeakhawunti yokwenyani, iakhawunti yedemo ixesha elide ixesha lelixa. Njengorhwebo nomrhwebi oneparameter esisigxina kunye nokuyeka-ukulahleka kunzima ukuwina umdlalo. Ndiyila inkqubo ndisebenzisa ilahleko yokumisa i-Hybridge edibanisa ukulahleka okunzima kunye nokuyeka okwenyani. Le ngcali ifuna inkqubo yokusebenza kweveki nganye ukuze ndiyile inkqubo yomsebenzi olula yokwenza umsebenzi ukusuka kwisilungisi kwaye emva koko ndivavanye. Emva komvavanyi wokubaleka ngesona siphumo sokusebenza. Ingcali iya kugcina iziphumo zokugqibela kwifayile yasekhaya. Xa ulayishe kwitshathi iya kulayisha i-optimizer yokugqibela kuyo kwaye ilungele ukuqhuba. Ungavavanya iisimboli ezahlukeneyo kunye nesibini, ingcali inokugcina ezo xabiso kwifayile enye. Kulula ukuqhuba iitshathi ezininzi kwidesktop okanye ngeVPS. WebApiServer = "expertoptimizer.com"; Uphawu_Vimba lokuVula = 10; // Ixabiso lomyinge we-Signal wokuvula [0… 100] Signal_ThresholdClose = 10; […]
Beka ukusebenza ngoku Abazalwana ababini u-EJ12 le EA ingummangaliso yenziwe ngononophelo kwaye yavavanywa kwintengiso ye-EUR / JPY ngokukodwa kwisithuba sexesha lesi-5m, injongo yale EA kukugcina ikomkhulu lakho likhuselekile ngasemva kwale Shogun ingakholekiyo kwaye iakhawunti yakho ayifikeleli kwi $ 0. Le EA ingasetyenziselwa imali encinci eyi-100, ndiyivavanye nge $ 50 kwaye isebenza ngokugqibeleleyo kodwa kuyacetyiswa ukuba uqale nge-100 yeedola, ndicebisa ukusebenzisa iVPS. Unokuphinda usebenze ngemali ephezulu, kufuneka uphakamise amaqashiso ngokweyakho
Ixabiso - 490 USD
Ingcali yokuthengisa ngokuzenzekelayo isetelwe ukukhula okuzinzileyo kwexesha elide, kusetyenziswa amanqanaba enkxaso kunye nokuchasana kunye nemimandla yexesha leFibonacci kurhwebo lwayo. Soloko ubeka i-Stop Loss kwaye uthathe inzuzo ukukhusela idiphozithi. Umcebisi weNgcali akasebenzisi: arbitrage, martingale, grid kunye neendlela ezifanayo. Iingcebiso Isibini semali "GBPUSD". Ixesha elibekiweyo: H1; Ubuncinci idipozithi: $ 100; Uhlobo lwe-akhawunti: ECN. Iparameters Magic Number - inombolo yokuchonga ye-EA; Amagqabantshintshi ngezimvo ze-EA-order; Imigama yeFractal - umgama omncinci phakathi kweeflacals; I-Bar Trail Stop - inani lemivalo esetyenziselwa ukumisela inqanaba le- "Stop Loss" (ukusuka ku-3, 0-off); I-FastBarsTrail-indawo yokumisa ngokukhawuleza; I-SweechPercentTrail-switch ukuya kwindawo yokumisa ngokukhawuleza kwi-% ukusuka kwi-0.1 ukuya kwi-1; Ulawulo lweMali: Ukurhweba ngoLot okuLinganisiweyo kunye nomthamo wokurhweba osisigxina; Ukurhweba ngomngcipheko oMiselweyo ngomngcipheko ozinzileyo; Ukurhweba okuLungisiweyo kweMargin ngomda omiselweyo; Ubungakanani bokurhweba ngokurhweba kunye nevolumu yokurhweba eyenziwe; Soloko ubeka i-Stop Loss kwaye uthathe inzuzo ukukhusela idiphozithi. Umcebisi weNgcali akasebenzisi: arbitrage, martingale, grid kunye neendlela ezifanayo. Umcebisi weNgcali akasebenzisi: arbitrage, martingale, grid kunye neendlela ezifanayo. Iingcebiso Isibini semali "GBPUSD". Ixesha elibekiweyo: H1; Ubuncinci idipozithi: $ 100; Uhlobo lwe-akhawunti: ECN. Iparameters Inombolo yoMlingo-inombolo yokuchonga […]
Izikhombisi ze Forex Review yeMT5
Izixhobo ze Forex yeMT5
Ixabiso - 100 USD
Dieser Scalper-Helfer hilft Ihnen, Ihren Trader zu verwalten, indem er UKUZENZEKA YOKUYEKA Ukuma kunye nokuthatha iplatziert. Wenn Sie eine Position eingehen und sich der der Markt schnell gegen Sie wendet, ist das ziemlich langweilig, nicht wahr? Aber mit dieem Helfer werden Ihr StopsLoss und TakeProfit AUTOMATISCH sein, konfigurieren Sie einfach wie viele Pips Sie wollen und das war's. Außerdem hat der Helfer AUTOMATIC BreakEven, Sie wählen einfach die Anzahl der Pips, die Sie platzieren möchten, und schließlich enthält er einen Stop-Protektor, der immer dann, wenn eine Kerze zu Ihren Gunsten schlieunt, den Stop Stop,
Iinkqubo zeMT5 Forex Izixhobo MT5
MT5 UKUBHALA ikopi
Ixabiso - iUSD
使用 此 EA 可以 通过 币 安 交易所 的 API 连接 到 MT5 交易 端 ， 利用 MT5 强大 的 量化 功能 实现 交易 策略 的 回 测。 操作 方法 ： 1 在 导航 栏 找到 EA ， 双击 之后 添加 币 安 的 API KEY, 保存后 KEY 自动 保存 ； 2 KEY 保存 后 会 出现 交易 面板 ， 通过 MT5 下 的 订单 可以 实时 展现 在 面板 ， 同事 也 可以 监控 币 币 安 是否 有 同样 的 订单 ； 交易 交易 只 只 展示 订单仔细 核对 ， 以 防止 漏 单 ； 3 API KEY 会 自动 保存 在 本地 ， 第二 次 打开 后 无需 重复 输入 ； 4 目前 只能 支持 BTCUSDT 、 ETHUSDT 、 LTCUSDT 合约 产品 5 最小 交易 量 以 币 安 的 最小 交易 交易 交易 交易； ； 6 币 安 KEY 是 存储 在 本地 ， 不会 上传 到 任何 第三方 ， 请 放心 使用 ； 7 如果 想 更换 KEY ， 请 直接 在 EA 内 修改 即可
Statistics Iinkcukacha manani zeAkhawunti ⭐ Izilumkiso malunga nemicimbi yeziganeko zokurhweba kunye nenqanaba lesiphelo ⭐ Ukukopa ngesiginali nge-Intanethi ekhawulezayo Лидер Ibhodi yabaphambili yokunikezelwa kwabanikezeli beempawu design Imizobo ye-ergonomic uyilo ukuboniswa okugcweleyo kwezikhundla zijonga iinkcukacha-manani ngokusebenzisa "ukuba kuthekani?" isihluzo .. ”-li lithuba lokuvavanya ii-hypotheses zorhwebo ngaphandle kwezikhundla ezingeyomfuneko kubalo-manani lokujonga ubulungisa kunye namanqanaba emarike abalulekileyo kuwe ukuze ufumane izilumkiso xa kufikelelwe nge-imeyile, umyalezo oshukumayo, okanye isilumkiso sesandi onokwenza izaziso malunga nayo yonke imicimbi yorhwebo kwiakhawunti yakho kunye nezaziso
Siyayithanda into esiyenzayo❤
Iimarike zibonelela ngenani elikhulu leerobhothi ezizenzekelayo, izikhombisi kunye nezikripthi zentengiso ye-forex. Umthengisi ngamnye ubanga ukuba yisoftware yakhe enokukwenza ube sisityebi. Owona msebenzi wethu kukuqokelela uphononongo lwesoftware olunyanisekileyo noluselubala.
Izibalo: 11 iindidi 0 iindawo 5842 Resources 12370 Reviews
Jonga Zonke iiSoftware ze-Forex
Iqonga elingenzi nzuzo lokujonga ngokunyanisekileyo isoftware ye-forex. Sinesiseko esikhulu kakhulu sokurhweba iirobhothi, izikhombisi, izikripthi zeMT4 kunye namaqonga orhwebo eMT5. Uvavanyo lwakho ngalunye lunokugcina abathengi abanokubakho kwi-scammers. .
Asizithengisi Abacebisi beengcali, izikhombisi kunye njl.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, ungasoloko uqhagamshelana nolawulo usebenzisa ifom yengxelo.
© 2021 Ilungelo lokushicilela ngu fxbotreview.Onke Amalungelo Agciniwe.
Nceda uphucule iFxBotReview
Nceda ushiye uphononongo lwakho ukuba sele usebenze nale software.
I-Fxbotreview yindawo yoluntu lwe-algotraders.
Injongo yethu kukudala iqonga elinemilinganiselo ethembekileyo necacileyo (EA, Indicatos)
Sele senze uphononongo kwiinkqubo ezingama-5000.
Ndiza kushiya uphononongo :)